Waxqabadka Meizu 17 waxaa qiimeeya AnTuTu ka hor inta aan la bilaabin | Androidsis
Waxqabadka Meizu 17 waxaa qiimeeya AnTuTu kahor intaan la sii deyn
AnTuTu, oo daaha ka rogtay 10-keeda ugu sareeya ee casriga casriga ee maanta ugu waxqabadka fiican waxayna muujisay xoogaa xog farsamo ah Meizu 17 a horumarkii dhowaa, hadda mar kale ayey timid in daaha laga qaado awoodda oo dhan waa tan xigta ee waxqabadka sare leh ee si rasmi ah loo soo bandhigi doono Abriil 17, taariikh ay maanta ka harsan tahay hal toddobaad.
Iyada oo ku saleysan tirooyinka ay daabaceen madal tijaabo ah, waxaan kugu soo dhaweyneynaa mobilada oo leh mid ka mid ah soo laabashada ugu wanaagsan sanadkaan, shaki la'aan, xaqiiqo ah in inta badan ay wadi doonaan by ugu awoodda badan Qualcomm chipset.
Shaashadda hoose waxay muujineysaa in moodelku ku hoos qoran yahay magaca lambarka M2081 wadarta wadarta dhibcaha AnTuTu ee 580,851 dhibcood. Markii hore, laba nooc oo ah Meizu 17 waxay ka shaaciyeen wakaaladda 3C ee Shiinaha magacyada M081Q iyo M081M.
M081M ayaa la sheegay in magaciisa loo yaqaan M2081. Sidaa darteed, warbaahintu waxay soo gabagabeysay in shaashadda shaashadda u dhiganta Meizu 17. Intaas waxaa sii dheer, dhibcaha AnTuTu waxay xaqiijineysaa in tani ay tahay nooc calan ah, iyo moobiilka kaliya ee heerka sare ka yimid shirkadda Shiinaha waa Meizu 17, okay istaag .
Waxqabadka Meizu 17 ee AnTuTu
Sidaan u nidhi, barxadda moobiilka ee lagu xarayn doono daboolka moobiilkan soo socda ayaa noqon doona Qualcomm Snapdragon 865, 7nm chipset oo leh ogolaanshaha asaasiga ah ee soo socda: 1x Cortex-A77 at 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 at 2.42 GHz + 4x Cortex-A55 at 1.8 GHz. Sidaa darteed, Adreno 650 GPU ayaa mas'uul ka noqon doona socodsiinta sawirada iyo ciyaaraha dalbanaya. , halka isku xirnaanta 5G aan la arki doonin maqnaanshihiisa. Tan waa inaan ku darnaa xaqiiqda inay ku imaaneyso shaashad 6.5-inji ah oo ah AMOLED oo leh FHD + xallinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Waxqabadka Meizu 17 waxaa qiimeeya AnTuTu kahor intaan la sii deyn
Kuwani waa qiimaha la sifeeyay ee Yurub ee Galaxy Tab S6 Lite
Sida loo furo loona beddelo faylasha HEIC ee ku jira Android